Ogaden News Agency (ONA) – Gudi Kusheega Amniga Qaran Ee Itoobiya oo Warbixin Soosaaray.
Gudi Kusheega Amniga Qaran Ee Itoobiya oo Warbixin Soosaaray.
Wargayska lagu magacaabo Addis Standerd ayaa bogiisa hore maanta kusoo daabacay xog uu kahelay shirkii ay yeesheen waxa loogu yeedho Golaha Amniga Qaranka Itoobiya, wuxuuna wargaysku qoray in xogtan ay tahay mid uu ilo golaha kudhadhaw kahelay.
Sida warkaysku uu qoray Golaha Amaanka Qaran ayaa warbixintooda kusheegay in milatariga iyo booliiska fadaraalku ay iska caabin xoogan kala kulmeen kacdoon wadayaasha Oromada iyo Axmaarada kuwaas oo sida ay gudigu sheegeen adeegsanayay xeelado kala duwan.
Godiga ayaa sidoo kale sheegay in sirdoonka wadanku ay soo gudbiyeen rabshado qabaa’il kusalaysan oo ay adagtahay in wax laga qabto kuwaas oo kasocda Gobolada Axmaarada, Oromada iyo Tigreega.
Sidoo kale sirdoonka wayaanaha ayaa sheegay in ay iska caabin xoogan kala kulmeen qoomiyada Tigreega iyadoo Gobolka Tigreegu uu yahay kan ugu aqabada badan marka laga hadlayo dhinaca kala dambaynta iyo ismaqalka.
Warbixinta gudiga amaanka qaranka Itoobiya ayaa lagu sheegay in ay hoos udhacday kalsoonida ay dadwaynuhu ku qabaan xukuumada, sidoo kale warbixinta ayaa xustay in ay shacabka iyo ciidamadu aad ukala irdhoobeen kadib markii dad shacab ah lagu laayay Ambo iyo Jelenqo oo labaduba katirsan Gobolka Oromia.
Wargayska ayaa sidoo kale sheegay dooda ugu kulul ee shirka hadhaysay in ay ahayd sababta ay dowladu udhayalsatay colaada Soomaalida iyo Oromada ee mudada dheer ka holcaysa labada Gobol ee dariska ah.
Mulatariga iyo booliiska fadaraalka ayaa iyaguna ku calaacalay in aysan wax wada shaqayn ah kahelin maamul Goboleedyada wadanka kadhisan gaar ahaan Oromada iyo Axmaarada, taas oo ay kusheegeen sababta ay wax uqaban waayeen.
Wargayska Thereporter.com ayaa isaguna qoray in xukuumadu ay gudi gaar ah usaartay ururka dhalinyarada Qeeroo oo lasheegay in ay hormuud kayihiin kacdoonada iyo qalalaasaha kajira Gobolka Oromia.
ONA Addis Aababa.